China Soft PVC Keychains orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | SJJ
Malaza eran'izao tontolo izao ny keychain chainà malefaka amin'ny PVC. Olon-dehibe sy ankizy ny mpampiasa. Ny vokatra dia azo omena amin'ny fotoana fohy miaraka amin'ny vidiny avo lenta sy antonony amin'ny karazana fotoana rehetra izay tian'ny olona haseho ny logo na ny heviny amin'ny alàlan'ny entana kely keychain.
Malaza eran'izao tontolo izao ny keychain chainà malefaka amin'ny PVC. Olon-dehibe sy ankizy ny mpampiasa. Ny vokatra dia azo omena amin'ny fotoana fohy miaraka amin'ny vidiny avo lenta sy antonony amin'ny karazana fotoana rehetra izay tian'ny olona haseho ny logo na ny heviny amin'ny alàlan'ny entana kely keychain. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fotoana isan-karazany, ho an'ny marika malaza, fampiroboroboana, fanatanjahan-tena, fialamboly, fanabeazana sns sns. Ny vatan-dahatsary Soft PVC miaraka amina karazan-kavina mifamatotra rehetra, dia sariaka amin'ny tontolo iainana, afaka mandalo Etazonia na Eoropeana. fenitra fitsapana. Ny ampahany PVC malefaka dia azo amboarina amina karazana endrika sy habe arakaraka ny fangatahan'ny mpanjifa. Ny loko Pantone rehetra dia misy, ny loko marobe dia azo tratrarina amin'ny zavatra iray ihany, ary ny antsipiriany dia azo aseho amin'ny endrikao ihany koa. Ny toetra malefaka dia hiaro ny antsipiriany ary hisoroka ny vay, hialana amin'ny ratra amin'ny vatana sy zavatra hafa.
Antony: Die Struck amin'ny 2D na 3D amin'ny lafiny tokana na roa
Loko: Misy ny loko Pantone rehetra, maro loko amin'ny zavatra mitovy
Safidy fametahana mahazatra: peratra mitsambikina, peratra fanalahidy, Rohy vy, kofehy, rojo baolina sns.
Fonosana: 1pc / polybag, na arakaraka ny fangatahan'ny mpanjifa
Teo aloha: nahatsiravina
Manaraka: Sarona fanalahidy PVC malefaka
Mpamatsy Keychain Keychain tsara indrindra any Sina
Sinaina Thanos Keychain tsara indrindra
Mpamatsy Keychain Thanos tsara indrindra any Sina
Teny nindramina keychains tsy manam-paharoa tsara indrindra any Sina
China Metal Keychain sy vidin'ny Keychain PVC
Filokana keychains ho an'ny logo manokana
Fehin-kibo vita amin'ny kodiarana namboarina
Medaly famonoana metaly zinc